FIVORIAN’NY ANTENIMIERA : Hirosoana ny fandinihana ireo raharaha mahavoasaringotra olona ambony
Efa tafapetraka tsara ilay vaomieran’ny Fitsarana Avo eo anivon’ny Antenimieram-pirenena, izay hisahana ny fandinihana ny antontan-taratasin’ireo olona ambony izay manana raharaham-pitsarana. 14 octobre 2020
Izy ireo izay tsy azo enjehina avy hatrany raha tsy mahazo fankatoavana avy amin’ny solombavambahoaka.
Araka izany dia hiroso amin’ny fandinihana an’ireo dosie efa tonga eo am-pelatanany ireo mpikambana ao anatin’ity vaomiera ity. Mandritra ny fivoriana ara-potoana faharoa izay hatrehin’ireo antenimiera roa tonta manomboka amin’ny 20 oktobra ho avy izao no hanombohan’ny asa. Voafaritry ny lalàna fa ao anatin’ny fivoriana ara-potoana no hanaovana ny asam-baomiera amin’ny fandinihana an’ireo antontan-taratasy nalefan’ny Fitsarana Avo, izay tokony hodinihin’ireo Solombavambahoaka.
Hatreto raharaha andramena miisa 10, fanodinkodinam-bolam-panjakana tamin’ny Fitondrana tetezamita sy tamin’ny Fitondrana teo aloha. Ireo amin’ny ankapobeny ny karazan’ireo dosie efa tonga eo am-pelatanan’ireo Depiote. Olona ambony teto amin’ny Firenena no voasaringotra ao anatin’izany. Araka ny fanazavana voaray dia mandalo ao anaty fivorian’ireo mpikambana ao anaty vaomiera aloha ilay antontan-taratasy. Mandalo ao anatin’ny fivoriana itambarambe avy eo ka eo no hanapahan’ny besinimaro hevitra na ho azo enjehina ilay olona ambony na hatsahatra ny fanenjehana azy.
Miriaria eran’ny tanàna sahady ireo lehilahy nahavanon-doza FANAFIHANA MPIVADY TANY BETSIAKA -AMBILOBE (345) 22 octobre 2020 Olona 04 naratra, vola 2 tapitrisa ariary lasan’ireo jiolahy miisa enina AMBILOBE (115) 21 octobre 2020 Tovolahy nisandoka ho mpitandro filaminana sarona ny alarobia teo ANKAZOMANGA (102) 22 octobre 2020 Sarona ireo 12 lahy mpampihorohoro sy mpanao fanafihana IMERINTSIATOSIKA (92) 21 octobre 2020 Nahanjahanjan’ny vahoaka irery ireo parlemantera mpanohitra AMBATONDRAZAKA (81) 26 octobre 2020 Lehilahy tompona “Agence de voyage” nadoboka am-ponja FIVADIHAM-PITOKISANA (64) 22 octobre 2020